यी राशी हुने ब्यक्तिहरु हुन्छन एकदमै चलाख अनि बुद्धिमान !! « गोर्खाली खबर डटकम
यी राशी हुने ब्यक्तिहरु हुन्छन एकदमै चलाख अनि बुद्धिमान !!
सनातन धर्ममा राशिको विशेष महत्व छ । राशिको आधारमा व्यक्तिको स्वभाव र योग्यता थाहा पाउन सकिन्छ । ज्योतिष शास्त्रमा यस्तो राशिको वारेमा पनि बताएको छ जुन राशिहरु धेरै बुद्धिमान हुन्छन् ।
यी राशिका व्यक्तिहरुलाइ मुर्ख बनाउन पनि धेरै गाह्रो पर्दछ । आज हामी यी ५ राशिको बारेमा चर्चा गर्दैछौ जुन धेरै बुद्धिमान हुन्छन ।
मेष राशि : मेष राशिका जातक सधै आफ्नो आँखा र नाक सधै खुल्ला राख्दछन । भनिन्छ जबसम्म यी राशिले आफ्नो इच्छा अनुसार सफलता पाउन सक्दैन तब सम्म चुप लागेर बस्दैनन् ।
मिथुन राशि : मिथुन राशिका मानिसहरु धेरै मेहनती र बुद्धिमान हुन्छन् । यी व्यक्त्तिमा नयाँ चीज जान्ने उत्सुकता हुन्छ । यी राशिका व्यक्त्ति ले जुन काम हातमा लिन्छन् त्यो काम पुरा गरेर छोड्दछन् ।
सिंह राशि : सिंह राशिका व्यक्त्ति आफ्नो बुद्धिले गर्दा अरुको मनमा राज गर्दछन । जे काम गर्छु भनेर सोच्दछन त्यो काम गरेर मात्र छोड्दछन । यी राशिका व्यक्तिलाई चलाखि पूर्ण तरिकाले काम निकाल्न पनि आउँदछ ।
वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशिका व्यक्त्ति बुद्धिमान प्रवृत्तिको हुन्छन् यही कारणले गर्दा यी जातक जीवनमा चाडो सफलतालाइ चुम्दछन । ज्योतिष शास्त्र अनुसार यी राशिमा व्यक्त्तिहरु साइन्स,मार्केटिंग क्षेत्रमा धेरै ठूलो प्रगति गर्दछन् । यी राशिका व्यक्त्ति प्रति अरु व्यक्तिहरु चाडै प्रभावित पर्दछन । अरुको जालमा चाडो फस्दैनन् त्यो कारणपनि सफल हुदछन् ।
धनु राशि : यी राशिका व्यक्तिहरु सकरात्मक सोचका हुन्छन् र यी व्यक्त्ति शिक्षा,लेखन,र रिसर्चको क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गर्दछन् । यी राशि हुने हरुलाई मुर्ख बनाउन गाह्रो पर्दछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :यो हो संसारकै सबभन्दा महंगो परिकारमध्ये एक, खाँदा हुन्छन यस्ता फाइदा !!:केभियारलाई धनीहरूको खानेकुरा भनिन्छ । यो हेर्दा पनि आकर्षक छ अनि खाँदा पनि नरम र स्वादिलो छ । रुसले यो खानेकुराको आविष्कार गरेको हो । पुरानो समयमा रुसका माझीहरू दिनदिनै केभियार खान्थे । आलु पकाएर केभियारसँग नियमित डायटका रूपमा उनीहरूले खाने गरेका थिए ।
केभियार भनेको खासमा माछाको अण्डा हो । माछाका केही प्रजातिहरूको अण्डाबाट मात्र यसको परिकार बन्छ । यो कालो, हरियो, खैरो र सुन्तला रंगको हुन्छ ।
केभियार स्टर्जियन प्रजातिको माछाबाट बन्छ । पोथी स्टर्जियन माछालाई विशेष रूपमा केभियारका लागि नै पालिने गरिन्छ । स्टर्जियन माछा १०० वर्षभन्दा बढी बाँच्न सक्छ ।
बजारमा विभिन्न किसिमका केभियार पाइन्छन् । तिनको मूल्य गुणस्तरमा निर्भर रहन्छ । ३० ग्राम केभियार लगभग १३ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । बेलुगा केभियार सबभन्दा महंगो हुन्छ ।
पोथी स्टर्जियनले थुप्रो अण्डा पार्ने भए पनि केभियारको मूल्य महंगो छ किनकि माछाले अण्डा पार्न १० देखि १५ वर्षको समय लगाउने गरेको छ । पहिलेपहिले माछा मारेर मात्र अण्डा निकाल्न मिल्थ्यो भने अहिले प्रविधि विकसित भइसकेकाले ज्यान नलिइकनै अण्डा निकाल्न मिल्छ ।
केभियारमा हुने ओमेगा–३ फ्याट्टी एसिडले शरीरमा रगतको डल्लो बन्न दिँदैन । यो मुटु तथा मस्तिष्कको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो मानिन्छ ।
यसमा सेलेनियम नामक एन्टीअक्सिडेन्ट पनि पाइन्छ । यसले शरीरका कोशिकाहरूलाई सुरक्षित राख्छ । सेलेनियमले इम्युन सिस्टम र थाइरोइडलाई पनि चुस्तदुरुस्त राख्छ ।
मलाई प्रचण्ड परिवारसँग मात्र जोडेर हेर्नु अन्यायपूर्ण – सिर्जना त्रिपाठी